ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्ग व्यक्तिलाई फ्रिमा मोबाइल - नेपालबहस
२३ फागुन काठमाडौं । कैलारी गाउँपालिका वडा नं ७ कार्यालयले वडाका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई आज मोबाइल र नेपाल टेलिकमको सीमकार्ड वितरण गरेको छ ।
लक्षित समुदायलाई सम्मान कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यालयले वडाभरिकै ज्येष्ठ नागरिकलाई मोबाइल वितरण गरेको हो । कार्यालयले वडाका सबै एकल महिला र अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई पनि मोबाइल दिएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी र नेपाल टेलिकम धनगढीका प्रमुख सुरत मल्लले लक्षित समुदायका व्यक्तिलाई उक्त सामग्री प्रदान गरे । वडा कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रमलाई रु चार लाख ८५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोही बजेटले मोबाइल खरिद गरेर ३७६ जनालाई वितरण गरिएको हो भने २९ जनालाई अझै अपुग रहेको बताइएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरीले चालू आवको नीतिगत निर्णयानुसार वडाका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेको बताए । उनले लक्षित वर्गको सामाजिक सुरक्षाभत्ता उहाँहरुको बैंक खातामा जम्मा भइसकेको खबर अब मोबाइलमै आउने जानकारी दिए ।
प्रविधिको जमानामा वडा कार्यालयले एउटा उदाहरणीय कार्य गरेको नेपाल टेलिकम धनगढीका प्रमुख मल्लले बताए । वडा नं ७ का अध्यक्ष कमलप्रसाद चौधरीले ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो समस्या, गुनासो स्थानीय सरकारसमक्ष राख्न सहज होस् भनेर मोबाइल र सीमकार्ड वितरण गरिएको बताए ।
तिब्बततर्फबाट सगरमाथा आरोहणमा अस्थायी रुपमा रोक ४ मिनेट पहिले
नेपाल लाइफको ‘नौलो सुरक्षित जीवन बीमा योजना’ सार्वजनिक १४ मिनेट पहिले
कोरोना बढेसँगै विदेशी पर्यटक मनाङमा अलपत्र ५२ मिनेट पहिले
नयाँ सरकार कोभिडविरुद्ध सक्रिय हाेला त ? ५७ मिनेट पहिले
प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ लिदै, मन्त्रीमण्डलमा पुरानै टीमलाई निरन्तरता १ दिन पहिले
कोभिड-१९ : आज थप १९ जना संक्रमितको मृत्यु २ हप्ता पहिले
जनरल इन्स्योरेन्सको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा स्थगित ७ दिन पहिले
अक्सिजन प्रयोग गरिने उद्योग बन्द गर्नु : स्वास्थ्य मन्त्रालय ३ हप्ता पहिले
ठमेलमा हुने यौनजन्य विकृति हटाउनु पर्ने प्रहरी निष्कर्ष २ वर्ष पहिले
डढेलो फैलिएपछि क्यानबेराको विमानस्थल बन्द १ वर्ष पहिले
लोकसेवा आयोगलाई सर्वोच्चको प्रश्न, कर्मचारी भर्ना किन रद्द नगर्ने ? २ वर्ष पहिले